Blackmagic URSA Mini Pro On Dalxiis Oo Yar Yar | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » Blackmagic URSA Mini Pro On Dalxiis Iyadoo Yar oo Isku Duban
Blackmagic URSA Mini Pro On Dalxiis Iyadoo Yar oo Isku Duban
Fremont, CA - Janaayo 13, 2020 - Blackmagic Design maanta waxay ku dhawaaqday in fiidiyowga tooska ah ee taariikhaha Yurub ee 'Little Mix's LM5 Tour' ay soo saartey shirkadda 'LED Shed', oo ku tiirsan soo iibinta iyo xakameynta qalabka ka yimid Blackmagic Design. Xalka waxaa kujiray URSA Mini Pro silsilado fiilooyin ah iyo ATEM 4 M / E Broadcast Studio 4K.
LM5: Dalxiisku waa safarkii 40aad ee riwaayadaha oo ay soo bandhigaan kooxda gabdhaha ee pop-ka Ingiriiska, Little Mix. Furitaanka Xarunta WiZink ee Madrid bisha Sebtember, safarka Yurub wuxuu gaabiyey 2 show oo wadarta ah, kuna soo gabagabeeyey London OXNUMX Arena.
Qulqulka shaqooyinka fiber multicamera waxaa loo daadgureeyay helitaanka iyo dib u gudbinta IMAG, oo leh laba kamarado URSA Mini Pro oo ku jira yaamayska iyo nidaamka loo yaqaan 'dolly system', laba gurbood oo hore oo guriga ah, iyo hal meel sare oo dhabarka dambe ah oo leh Canon 96x 4K muraayad dhaadheer, si loo qabto bandhiga sedex geesoodka ah ee ka duulay garoonka.
Laydhka Shed's ee Luke Levitt wuxuu leeyahay: “Caadi ahaan waxaan ku haysan lahayn hal kamarado godka, laakiin annaga oo si dhaqso leh ugu dhaqaaqno masraxa, anagoo labo u jeedno inaan qaban karno riwaayadaha oo dhan. Waa shaqadeena sida agaasimayaasha fiidiyowga si loo hubiyo in qof walba oo qolka jooga uu arki karo waxa socda, waana lagama maarmaan in la sameeyo dhaqdhaqaaq aad u badan oo kaamirooyinka ah intii suurtagal ah si loo muujiyo ficilkaas. ”
Luukos wuxuu sii raaciyey: “kooxdu waxay lahaan kartaa xariiq cod oo ay mid waliba ku heesaan, taasina waxay u baahan tahay in si gaar ah loo qabto. Waxaan qaadnaa qoraallo badan, sheeko xariir show ah intii suurtogal ah kahor. Taasi waxay xaqiijineysaa inaan soo marnay dhamaan daqiiqadihii ugu muhiimsanaa. ”
Waxaa jiray sideed shaashad wadarta guud; laba dhinac IMAGs iyo lix shaashad oo LED ah masraxa. Waxaan haysannay darbi gadaasheed oo u dhexeeya afar shaashad ah oo iftiinka leh - waxaan ugu yeeraynaa 'shards' - iyo shaashad shaashad leh oo saqafka sare leh, ayuu yiri Luukos. Dhammaantood waxay ka samaysan yihiin desay X5.2 labajibaarane laba jibaaran.
Muuqaallada kaamirada tooska ah waxaa lagu dhexjiray waxyaabo loogu talagalay Black Skull Creative, oo ay ku midoobeen Soo-saaraha North House. Bandhigga ayaa sidoo kale lagu xardhay faragalinta fiidiyowga, iyada oo la sheegayo farriimo dhiirrigelin leh oo ku saabsan awoodsiinta haweenka, iyo wax ka qabashada dhalleeceynta kooxda ay la kulantay sideedii sano ee ay jirtay.
Kaamirooyinka waxay tooganayaan 1080p25. “Dhammaan shaashaddu waxay ahayd 4K, waxaanan haysannay ku dhawaad ​​50 milyan oo pixels oo aan buuxinno, marka waxaa jiray waxoogaa kor u kaca ah. Isku-darka aragtida waxaa lagu sameeyay ATEM 4 M / E Broadcast Studio 4K, oo leh ATEM 1 M / E Advanced Panel. Markaa wax walbaa waxay galeen shabakeena warbaahinta D3, oo ay kujirto tusmada tusmada. Dhammaantiis waa la isku daray oo la duubey iyadoo la adeegsanayo barnaamijka 'D3'.
Sawirada alaabada ee Blackmagic URSA Mini Pro, Blackmagic Camera Fiber Converter, Blackmagic Studio Fiber Converter, ATEM 4 M / E Broadcast Studio 4K, ATEM 1 M / E Advanced Panel iyo dhammaan waxyaabaha kale Blackmagic Design alaabada, ayaa laga heli karaa www.blackmagicdesign.com/media/images.
Blackmagic Design abuuraa wax soo saarka ee ugu badan dunida tayada video tafatirka, kamaradaha film digital, correctors midabka, converters video, la socodka video, router, switchers saarka live, rikoorrada disk, kormeerayaasha waveform iyo scanners dhabta ah film waqtigii film feature, wax soo saarka post iyo baahinta telefishanka warshadaha. Blackmagic Design'S kaararka qabashada DeckLink bilaabay kacaan in tayada iyo awoodda wax soo saarka post, halka abaalmarinta Emmy ™ shirkadda ee ku guuleystay DaVinci waxyaabaha la saxo color ayaa heysatay warshadaha telefishanka iyo filimka tan 1984. Blackmagic Design sii tabo cusub dhulka jabiyay oo ay ku jiraan 6G-SDI iyo 12G-SDI alaabta iyo 3D stereoscopic iyo HD Ultra workflows. Aasaasay by keentay post dunida tafatirayaasha-soo-saarka iyo injineerada, Blackmagic Design xafiisyo ee USA, UK, Japan, Singapore iyo Australia. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan tag www.blackmagicdesign.com.
Mashaariic fara badan ee Bandhig Faneedka Sanadka 2020 ayaa loo adeegsaday Naqshadeynta Madoow - January 27, 2020
Shirkadda Dalet ayaa Daah-Furtay Balaadhinta Suuq-geynta oo balaaran iyada oo loo magacaabay Matthew Carter Madaxa iibka, UK, Benelux iyo Koonfur Afrika. - January 22, 2020
'' Ford vs Ferrari '' wuxuu isticmaalaa DaVinci Resolve si uu u abuuro qaabab aan caadi ahayn oo loogu talagalay filimka 'Nostalgic Movie' - January 22, 2020
Udoodar Ololaha Caafimaadka Aurora / Colonie Blackmagic Design Broadcast Engineer Broadcast Engineering Warbaahinta-Warbaahinta Warbaahinta-SocialMedia Broadcast-SocialMeida tafatirka Graham Chapman Prmoted toEditor wax soo saarka post SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Fiilooyinka Colonie The Colonie - News COLONIE / Chicago TV Technology TVU Networks Video Engineer	2020-01-13
Previous: Kamaradaha Shineemadda Blackmagic Pocket 6K iyo URSA Mini Pro 4.6K G2 Qabsashada Taxanaha Sun ee Kacitaanka
Next: Kooxda Sawirada Adeegga Soo Saaraha ee Sony Sawirrada Kooxahan Ayaa Soo Bandhigay Ciyaartooda "Jumanji: Heerka Ku Xiga"